Kana iwe uchifarira iyo Microsoft Surface Pro, iwe unofanirwa kutarisa chigadzirwa chakafukidzwa mune ino chinyorwa, iyo Acer switchch 5 SW512-52.
Zvakawanda seSurface Pro, iyi iri Windows piritsi ine yakafanana fomu-chinhu, yekukata-kumira kumashure uye inobatika khibhodi keyboard. Iyo inowana 12-inch 3: 2 IPS inobata skrini ine peni rutsigiro uye zvese zvinongedzo zvakaiswa kuseri kwayo, mukati meyakavakirwa simbi chassis.
Kusiyana nezvimwe zvakawanda zvakafanana 2-in-1s kunyange zvakadaro, Acer inoisa yakangorodzwa Core U processor mune ino kifaa, saka switchch 5 inopa simba rinodikanwa kubata zviitiko zvezuva nezuva uye multitasking, asi pasina ruzha rwekuputika fan.
Haisi yega isingafarire Core U Windows piritsi kunze uko, asi zvakadaro ndeimwe yevashoma, padivi peMicrosoft Surface Pro 5 (Core i5 vhezheni chete) uye iyo Acer Aspire Chinja 12 Alpha. Mazhinji dzimwe sarudzo dzakatonhorera fan, senge Asus Transformer 3 Pro, Lenovo Miix 720, iyo 2017 HP Specter X2 kana iyo Dell Latitude 12 2-in-1.
Iyo isinga faniki ndeyakakosha yekutengesa nzvimbo, uye yakapihwa mitengo yayo inodhura zvakanyanya kana ichienzaniswa neiyo Surface, iyo switchch 5 inokwezva maziso mazhinji. Isu tunganidza zvese zvimisikidzo pazasi, nezvakawanda pane yakasimba mapoinzi uye nekukanganisa kwayo, saka nekupera kwechinyorwa iwe uchaziva kana ichi chiri chishandiso chakakodzera kune zvaunoda (kana kwete) uye kuti chinopokana sei kukwikwidza.
Mazita akadaro akaongororwa
Acer Shandura 5 SW512-52
Screen 12.0 inch, 2160 x 1440 px, 60 Hz, IPS, kubata, kunyorera rutsigiro
Processor Intel Kaby Lake-R Core i5-7200U
ndangariro 8 GB LPDDR3 (soldered)
chengetedzo 256 GB SSD (M.2 80 mm NVMe)
Kubatana Wireless AC (Qualcomm Atheros QCA6174), Bluetooth 4.1
Ports 1x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.1 gen 1, mic / musoro, MicroSD kadhi kuverenga
bhatiri 39 Wh, 45 W magetsi
zera Hwendefa: 293 mm kana 11.50 ”(w) x 203 mm kana 7.99” (d) x 9.6 mm kana 0.37 ”(h)
Tafura uye Folio: 293 mm kana 11.50 ”(w) x 203 mm kana 7.99” (d) x 16 mm kana 0.62 ”(h)
uremu Tafura: 0.91 kg / 2.00 lbs
Tabura uye Folio: 1.28 kg / 2.82 lbs
Zvidhina Simba: .155 kg / .34 lbs
Extras backlit keyboard, HD kumberi kamera, 8MP kumashure kamera, pamberi yakatarisana nevatauri veStereo
Kugadzirwa uye kutanga kutarisa
Izvo zvakakosha kuti udzokorore kuti iyo Acer switchch 5 ndeye yepakati-dhiza chigadzirwa uye saka yakachipa zvakanyanya kupfuura iyo Surface Pro 5. Iyo i5 inogadziriswa ine 8 GB ye RAM uye 256 GB SSD inonyorwa ku $ 799 kuUS uye kutenderera 1000 EUR muEurope (iyo keyboard uye peni inosanganisirwa), nepo imwecheteyo mamiriro akagadziridzwa eStall anotengesa ne $ 1300 (isina peni uye keyboard. ), nepo 2017 HP Specter X2 ichienda kune $ 1250 (nepeni uye nekhibhodi). Ndambotaura izvi zviviri nekuti iwo emo anotarisa zvakanakisa nekuvakwa maturoni neiyi mhando yepiritsi-yakaita fomu-chinhu.
Kudzokera kuiyo switchch 5, haina nzira isina kunyatsogadzirwa kana yakaipa, asi haina kunaka uye yakanyatsopukutwa senge idzo mbiri. Iyo piritsi chete inorema yakakomberedza 2 lbs uye yayo yekunze kesi yakagadzirwa zvachose nesimbi. Haisi inokotama kana kushinha kana ichinge yashandiswa, uye yakagadzika zvakanaka kubata zvakare, nekuda kwemakona akapetwa nemakona anotenderedzwa.
Chinhu chete chisingabvunzwe chisaruro cheiwo musono wakakomberedzwa nechemberi, uko kunotaridzika kwakachipa imo. Iyo idiki diki uye ini ndinotarisira kuti yakawanda ichave nayo.
Kuve nekutarisa nekukurumidza kwakatenderedza Shanduko iyi, iwe uchaona kuti kumashure kuri nyore kwazvo uye kune dzimba chete kamera, nepo kumberi iko kunenge kwakazara kwakaputirwa mugirazi uye kunogara maviri akapetana matauri grill kumusoro.
Mamwe mabhatani uye ports anoiswa akapoterera pamucheto. Pane vhoriyamu rocker uye simba bhatani (ine yakabatanidzwa yemunwe-kuverenga) kurudyi, kune yakazara-saizi USB A, USB-C (gen 1, isina Thunderbolt 3) uye neyemusoro musoro jack kurudyi, padivi PSU, ichiri pamusoro wepamuromo Acer yakaisa microSD kadhi-muverengi akakomberedzwa nemapini maviri emakrofoni. Iko zvirokwazvo hapana kwekudya uye kuneta grill pamativi, seyiyi kifaa ichi chiri kungoita kwakapora.
Kushaikwa kweThunderbolt 3 kunogona kuita kuti vamwe vako vabve, asi switchch 5 inogona kuramba ichikwira kumusoro kwe 4K 60 Hz skrini kunyange iyo USB-C port uye, ini ndichigere kuyiyedza, inokwanisawo kubhadharisa kuburikidza ne USB-C pane mamwe emashoko andakaverenga online.
Izvo parutivi, ngatitaure nezve yekukanda uye iyo isingawanzo mashandisi, akasiyana pane zvakaiswa nemamwe maOEM pamakomputa avo akafanana. Iyo yekukoka yakavakirwa mukati mekuseri uye inomira kunze zvishoma, izvo zvinoreva kuti piritsi harizorore zvachose pane isimbi kumashure kana yakaiswa pasi, iyo inofanirwa kudzivirira kuti isatanga. Iyo yekukanzura inorema kunyange uye kwete iyo iri nyore kuvhura, sezvo ichishaikwa chero inogadzirwa yeminwe kuti ibate kubva, saka zvigunwe zvako nezvipikiri zvinogona kutambudzika. Izvi hazvisi izvo zvakanyanya kuitika kwayo.
Iyi yekukanda inovavhura kune chinzvimbo chakatsiga chinochengeta skrini pak 110-120 degrees angle. Kubva pano unofanirwa kushingirira pachiratidziro uye mukwende unoita mutserendende wakavhurika kune chinodiwa chinzvimbo, asi kana ukatora chishandiso ichocho chingabva chadzoka kuchimiro chayo chakataurwa chisati chakamira. Ini ndinogona kurarama neiyi nzira padhesiki, ndichiona bhaisikopo kana kutevedzera laptop, ipo mudziyo unoiswa pane yakatarwa uye ini handifambire kuifambisa. Idzo tsoka dzakasviba pane yekukwevera uye chaiyo masiraidhi zvakare inobatsira neyakagadzikana padhesiki, kunyangwe kana asiri iwo madhiri.
Ndakawana iyo switchch 5 isingagadzikane kushandisa pamakumbo, asi pakatanga kusundira screen kuseri kwaro kwakareba chinzvimbo kunyangwe nepadiki pese pandinofamba, uye ndaifanira kuenderera ndichidzvanya kuti chidzokere kune chinzvimbo chaunoda. Nezvokuishandisa pakasendama pane sofa kana pamubhedha, zvakanaka, ndakaona zvisingaiti kuti isashandise nzira iyi. Pane mavhidhiyo paYouTube anoratidza zviri nani mashandiro anoita katku iyi.
Sehwendefa iyo switchch 5 zvakare yakanaka, kunyange kana ine hurema uye yakakura kupfuura dzimwe sarudzo. Iyo inowanawo zvishoma diki chidzitiro, iyo inoshandura mumhando dzakasviba bezels, asi zvirinani yakavakwa yakasimba. Iyo skrini inosanganisira digitizer uye peni rutsigiro, uye isu tichataura nezvavo mune chimwe chikamu.
Zvese mune zvese switchch 5 yakanyatsovakwa uye yakanaka kutaridzika hybrid uye inogadzira yakanaka laptop uye piritsi mune akawanda mamiriro. Ini handisi fan wekuumbwa kwekukohwa kunyange zvakadaro, ini ndinonyanya kuda mashandiro pane iyo maSafface.
Senge mimwe michina yakawanda iine fomu-chinhu, iyo switchch 5 inowana keyboard folio. Inotaridzika uye kunyange inonzwa yakanyanya kufanana nemafolios paMicrosoft Surface Pros uye Asus Transformer Pros, ine yakanzwika kunge inopedza uye plastiki yemukati chassis. Yedu yuniti yakauya mune grey uye handina chokwadi kana Acer yakaronga kuikudza mune mamwe mavara zvakare. Iko kunzwa kupedzisa kunonzwa kunetseka kubata, asi ini handigoni kutaura kuti zviri kuzera sei uye kuti zvichapera-kwapera mushure mechinguva.
Iyo bhatani inonamira zvine simba kune piritsi uye inongoshanda chete uchinge wakasimudzwa, sezvo ichifambiswa neasidhi yacho pachayo. Iyo inogona kuiswa-kumusoro munzvimbo mbiri, yakazara kumeso padhesiki kana zvishoma yakasimudzwa, kune zvishoma inofarira uye yakawanda ergonomic typing chinzvimbo. Ose ari maviri sarudzo pane ese aripo detachable ane keyboard-folios.
Iyo folio inogadzirwa nepurasitiki uye zvakare yakaonda uye yakareruka, saka hazvishamisi kuti inochinja zvishoma munzvimbo yakakwidziridzwa. Pasinei neizvi, chiitiko chekunyora chinoshamisa.
Makiyi ane mhinduro chaiyo uye mhinduro, kunyangwe kana yakamanikidzwa pamativi, uye hapana imwe yeiyo mhinduro spongy yandakasangana nayo pane yekare Alpha 12. Iyi ichiri pfupi sitiroko keyboard uye kwete iyo inokurumidza kunyora pane chero, asi kwandiri yakaratidza kuve imwe yeiyo yakanyatsoita chokwadi ini ndinofanira kuyedza nguva pfupi yapfuura.
Iyo keyboard zvakare yakadzoserwa shure, asi makiyi chete anovhenekera kana akamanikidzwa uye kwete mukutsvaira zvigunwe pamusoro pechinjira.
Kutaura nezvazvo, iyo clickpad iri panzvimbo idiki uye inogadzirwa nepurasitiki. Izvo zvakadaro Microsoft Precision pamusoro uye inoshanda zvakanaka kunze kwebhokisi. Ndakaona iri diki kunonoka pakuda kwangu, uko kunogona kugadziriswa kubva kumiseto, uye ndingati kupindura kwayo nekunyatso swipes kunogonatsiridzwa, asi idzi parutivi hapana chandinopomera. Ini zvakare handina kumhanya mune chero nyaya kana kuona chero quirks panguva yangu nekombuta.
Iyo switchch 5 yemuviri Bhatani reBhatani zvakare inowedzera seyemunwe-sensor, uye inoshanda mushe pamwe Windows Mhoro. Izvo hazviwanzo kunyoresa iko kudhinda kubva kwekutanga kuyedza hazvo, saka ruzivo rwekupinda mukati haruna kungoita musono senge kune mamwe madhivha ane zvigunwe-zvemagetsi.
Ndakaverenga mamwe mashoma ongororo yeiyi switchch 5 uye vese vanoongorora its screen. Ehe, haina kupenya, seyunifomu, seyakachena ruvara kana kunyatso kupinza seyunowana iwe paSurface Pro 5, asi ini ndakawa kuti haina kushata kunyange.
Acer yakaenda ne 3: 2 12.0-inch screen uye IPS pani yakagadzirwa neWST (kodhi kodhi KL.1200W.004), ine resolution ye2160 x 1440 px. Yakapinza yakaringana neiyi saizi yemadziro uye kuderera kuderera kunonyatsoita nepadhi nemahara mukati uye inobatsira nehupenyu hwebhatiri kusvika pamwero. Iwe uchazowana zvimwe nezvepaneli iri mune data uye mifananidzo pazasi:
Nhamba: 95% sRGB, 66% NTSC, 71% AdobeRGB;
Akayera gamma: 2.3;
Mazuva ano Max ari mukati mekona: 306 cd / m2 pane simba;
Kusiyana kwekupenya kukuru: 6410: 1;
Nhamba yakachena: 7700 K;
Dzvuku pahupamhi hukuru: 0.50 cd / m2.
Mavara haana kana kunyatsojeka, kana kuti zvakatemwa chero. Zvinosuruvarisa kuti calibration yedu yaisaratidzika kuita zvakawanda maererano nekugadziriswa kweDeltaE, asi inogona kubatsira kuregedza gamma uye chena poera skewages. Unogona tsvagai pano kana uchida kuyedza.
Ini handina kuwana chero kubuda pachena kweropa kubuda pane wangu sampu, asi ndakaverenga kumwe kunyunyuta mune kumwe kuongorora, saka iwe unofanirwa kuziva kuti kufanana kunogona kuva nhau yerombo nechinhu ichi.
Zvese mune zvese, hongu, iwe unogona kuwana zvirinani zviratidziro pane mamwe mahwendefa kunze uko, asi uchipiwa mutengo wepakati-wepakati wekushandura 5, ini ndoti vazhinji vako unofanirwa kunge uine zvakanaka nepanera Acer yakasarudzika iyi komputa, chero haudhirike chidimbu chipfupi papanari lottery uye wopedzisira uine mavara akajeka kana kubuda kweropa. Ita shuwa kutenga kubva kunzvimbo iyo inobata inodzoka zvakanaka, zvingangoitika.
Iri skrini inosanganisira digitizer (yakagadzirwa naEANAN, kubva pane zvandinogona kuudza) pamwe nekutsigira Acer yakagadziridzwa Active Pen ine 1024 mazinga ekudzvinyirira kunzwa. Iyo peni ine powered inoshanda neAAAA bhatiri uye inosanganisirwa neiyo Shanduko 5. Haisi iyo imwe peni Acer yakasungirirwa neiyo yekare switchch 12 Alpha, uye sekureva kwandinogona kutaurira (uye nevamwe vanoongorora vanozvisimbisawo) inoshanda mushe kupfuura iyo yekare modhi.
Iyi peni inonzwa yakanaka kuruoko uye yakareruka, zvakanaka, sechiedza sepeni inoshanda inogona kuva. Iwe unogona kuibatanidza kune yakazvitsaurira chiuno pane iyo folio yekhibhodi kana isingashandiswi, asi hapana nzira yekuichengetedza mukati meiyo chaiyo slate. Ruzivo rwangu nezvinyoreso pane mashoma, sezvo ndisinga dzishandise zuva nezuva, asi ini ndakawana iyi imwe yakanakira kutara nekunyora kwekutora zvinyorwa. Kutsvaga kunogona kuitika, sezvo ini ndichifunga kuti inogona kukurumidza uye yakajeka, asi kurambwa nemuchindwe kwakashanda. Ita shuwa kuverenga zvimwe zvinoratidzawo, ini handisi kuenda-kana zvasvika kumapenjeni uye zvimwe unogona kuwana maonero kubva kuvanhu vanonyatso kutora zvinyorwa pabhuku rekubata zuva nezuva.
Ini zvakare ndichawedzera kuti iyo peni pane iyo Surface Pro 5 inonzwa yakanyanya kurongeka uye inobata 4096 kumanikidza manotsi, uye kunyangwe iyo NTrig digitizer paiyo yazvino Surfaces, iyo inking uye yekudhirowa ruzivo rwavanopa yakakwirira.
Chigadzirwa uye kushanda
Acer inotengesa switchch 5 pamwe neCore i5-7200U kana Core i7-7500U processor, 8 GB yeye LPPD3 memory uye sarudzo ye 256 GB kana 512 GB SSD. Takafanira kuyedza base Core i5 modhi iyo inopa kukosha kuri nani kune iyo imo yemari.
Iyo yakauya neine mukurumbira inomhanya Intel SSDPEKKW256G7 PCIe x4 SSD kuti zvirinani kupfuura ini zvandaitarisira chikamu chepakati-tier panoshandurwa iyi switch ye5.
Ini ndinofunga kutenga chigadziriso chaunoda kubva pakutanga, sezvo kupinda mukati meiyi komputa kuri kwakaomarara pane necustomer yeparutivi uye mazhinji ezvigadzirwa anotengeswa. Handina kuvhura sampule yangu, asi iyo SSD inofanirwa kutsiviwa neiyo inoenderana M.2 80 mm drive kuitira kana uchida kuisa yakakura mukati. Tora izvi ne njere yemunyu asi, ini handikwanise kuvimbisa chokwadi kuti chinogona kutsiva sezvo ndisina kupinda mukati.
Iyo mbiri-core i5-7200U processor inokurumidza kushandiswa kwezuva nezuva (kubhurawuza, mabhaisikopo, mimhanzi, zvinyorwa, nezvimwewo) uye inogona kubata multitasking nemazvo. Iyo inogonawo kubata nemimwe mitoro yakaoma, sekugadzirisa mufananidzo mu Photoshop kana pamwe kutamba mutambo wakareruka uyo unogona kubatwa neinosanganiswa Intel HD 620 graph chip. Nekudaro, ngatirege kukanganwa iri piritsi rine inotonhorera chete, saka hazvifanire kushamisika kuti haikwanise kuwana iro rakanakisa kunze kwemahara akaiswa.
Zviri pedyo chaizvo hazvo. Iyo CPU inomhanya zvakanyatsonaka nemabasa mazhinji ezuva nezuva, pasina kuwandisa kana kune chero matambudziko ekusvika iyo yakakwira Turbo Boost kumhanya. Nhoroondo mumifananidzo iri pasi apa.
Inomhanya zvakanaka mumabhenji zvakare, nemadonhwe mashoma e100-200 MHz yeTurbo Speeds inoonekwa neCinebench (iyo inoisa 100% mutoro pamakori), yandaitarisira kuti inogona kururamisa pamwe nekusagadzikana. Ndakatomhanya Cinebench mu loop ndisina kucherechedza shanduko yemaitiro, saka zvese izvi Shanduko 5 inoita zvirinani kupfuura kungoita yakadonhedzwa Surface Pro 5, iyo mashandiro ayo anodonha zvakanyanya mumitoro yakafanana inoenderera mberi (mabviro).
Kuita nemitambo kushoma hazvo, sezvo Acer yaifanira kumanikidza CPU kuvhara pasi kuitira kuti ibvumidze yakakwana simba GPU, ichiramba ichipisa pakareba. Mifananidzo iri pazasi inoratidza kuti iyo CPU's package inosvika pakupisa kweanotenderera 70 Celsius apo ichimhanya mitambo, iyo yakanyanya kuderera kupfuura iyo TMax yekukwira kusvika ku100 degrees, asi kuita kwacho kunosvibisa nenguva sekuita komputa kupisa.
Iko kupisa kunopararira zvakanyanyisa kwazvo kuzvikamu uye mhaka neiyi mhando yekusafenda dhizaini uye yakaonda kuvaka, ndicho chikonzero chikuru Acer yakamanikidzwa kudzikamisa mafambiro kuitira kuchengetedza tembiricha. Kunyangwe zvakadaro, iyi komputa inopisa kwazvo pasi pekuremerwa, sezvamunoona muchikamu chinotevera.
Takamhanya mamwe mabhenji zvakare, kana uchifarira nhamba dzenyama.
3DMark 13: Sky Driver –3846, Dzvinyu yeMoto - 866, Nguva Inoongorora - 341;
3DMark 13 - Graphics: Sky Driver - 3714, Rova Yemoto - 939, Nguva Inoongorora - 299;
PCMark 08: Musha Unokodzera - 2710;
x264 HD Benchmark 4.0 32-bit: Pfuura 1 - 112.41 fps, Pfuura 2 - 21.47 fps.
Zvese mune izvi zvese Shandura 5 inoita zvirinani kupfuura zvandaitarisira kubva paCore U pasipo piritsi rakapora. Muchokwadi, inoita mabheta kupfuura mazhinji fan yakadziya ultraportables.
Iyo inobata mabasa akajairika zvakanaka uye inofanirwa kubata zvakanyanya yakanyanya CPU mitoro zvakare. Haisi komputa iyo yaunofanirwa kutora kune inorema mitoro kana yemitambo kunyange, ndosaka ini ndisingakurudzire kuenda kune iyo Core i7 konifuras tarisiro yekuwedzera basa.
Mheremhere, Moto, Kutaurirana, Vatauri nevamwe
Sezvataurwa kakawanda panguva ino yechinyorwa ichi, iyo switchch 5 yakangopora nekushandiswa Acer's patent LiquidLoop kutonhora kunoratidzika kuita basa rakakura pakuchengeta iyo i5 U processor ku bay. Iyi komputa haina kuwana chero chinofamba mukati mega (semu HDD) uye ini handina kucherechedza chero mhando yemagetsi mheremhere kana kupenya pane yangu sampuli, zvinoreva kuti switchch 5 inomhanya zvakakwana yakanyarara.
Kusvika pakadzika tembiricha, slate yacho inosvika panenge pakati pama30 nekushandiswa kwemazuva ese uye yakakwira ma40 ane magemhu nemabhenji. Izvo zvinopisa, asi iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti zvese izvo zvikamu zvakaiswa kuseri kwechidzitiro uye sekureba sekunge uri kuishandisa sepacomputer, hausi kuzoona iyo tembiricha sekunge nebookbook rakajairika iro rinovaka zvikamu pasi pazvo. the keyboard. Muchokwadi, iyo keyboard folio inogara pane mamwe mamiriro akanyatsogadzikana, kazhinji pasi pe30 madhigiri kunyange padenga rayo repamusoro apo rinonamira piritsi. Kuita basa rinodikanwa uchiribatirira sepiritsi parutivi kunogona kukurumidza kusagadzikana.
* Kushandisa kwezuva nezuva - 1080p Youtube clip mu EDGE yemaminitsi 30
* Kutakura - kutamba NFS: Yakawanda Inoda Imaminitsi 30
Pakusvika ku-kuungana kunoenda, kune Wireless AC uye Bluetooth pakombuta iyi. Acer yakaenda neQualcomm QCA6174 isina waya module iyo yaibata ichiri padyo neRouter, asi ichinyanya kunetseka pamakumbo e30 ine 2 madziro pakati.
Ini handina kuona vamwe vanhu vachinyunyuta nezvenyaya iyi, zvakadaro, pane mukana wakanaka kiyi yangu yakasangana nezvimwe zvekutyaira kana kuti haina kunyatsosangana pamwe neketi yangu. Kunyangwe zvakadaro, kusashanda zvakanaka kweasina waya pahurere hwechinhu chinhu chandaitsvaga nekuyedza kana ndaizowana switchch 5.
Vatauri vanoiswa pamusoro pechiso uye tarisa mushandisi, chimwe chinhu chandinoonga. Hazvina ruzha zvakanyanya, isu takayera chete mavhoriyamu epamusoro kusvika ku76 dB pamusoro, uye iwo zvakare tinnier kupfuura zvandaizoda, aine mashoma anooneka chete kuzasi kwe140 Hz.
Imwe yekupedzisira yekutaura apa ndiyo webcam. Iyo inowana iyo sensor yeHD, yakaiswa pamusoro pechidzitiro, painofanirwa kunge iri, uye inotora mamwe mapfupi akanaka, asi hachisi chinhu chekuzvirumbidza nacho.
Iko kune 39 Wh bhatiri pane switchch 5, iri tad yakakura kupfuura bhatiri pane Aspire 12 Alpha (37 WH), asi idiki pane izvo iyo Surface Pro 5 inopa (45 Wh).
Tichifunga nezvehukuru hwayo, nhare yemukati uye inoratidzira yakakwirira-sarudzo, haufanirwe kutarisira kuti iyi ndeyemhanyi anomhanya. Izvo zvinogadzikika kunyangwe nekushandiswa kwemazuva ese, sezvamunoona pazasi (isu tinoisa iyo screen pa30% kupenya, ingangoita 120 nits):
9.1 W (~ 4 h 15 min yechishandiswa) - kunyatsoongorora nekukanyora magwaro kuGoogle Drive, kuenzanisa Mode, skrini pa30%, Wi-Fi ON;
5.3 W (~ 7 h 20 min yechishandiswa) - 1080p video yakazara yakasvibira pa Youtube muInternet Explorer, Balanced Mode, skrini pa30%, Wi-Fi ON;
3.9 W (~ 10 h yekushandiswa) - 1080p fullscreen .mkv video muIndaneti yeApple, Balanced Mode, skrini pa30%, Wi-Fi ON;
4.9 W (~ 8 yekushandiswa) - 4K fullscreen .mkv mavhidhiyo muIndaneti, Balanced Mode, skrini pa30%, Wi-Fi ON;
14.8 W (~ 2 h 35 min yekushandiswa) - inorema kubhuroka muEdge, Balanced Mode, screen ku30%, Wi-Fi ON;
23 W (~ 1 h 30 min yekushandisa) - kutamba pamabhatiri, High Performance Mode, skrini pa30%, Wi-Fi ON.
Iwe unozowana pfupi pfupi nguva dzenhamburiko i7 kumisikidzwa, kana iwe ukafunga kusarudza iyo.
Acer pairs iyi Laptop ine compact 45 Wh charger iyo inorema .155 kg / .34 lbs (European Version). Iyo inoshaya yekushaja nekukurumidza, uye recharge yakazara inotora zvishoma pasi pe2 maawa.
Mutengo uye kuwanikwa
Iyo Acer switchch 5 SW512-52 inowanikwa mumatunhu mazhinji kubva muna Gumiguru 2017.
Ini ndinowana kukosha kwakanyanya muCore i5-7200U kumisikidzwa ne8 GB ye RAM uye 256 GB yekuchengetedza SSD, iyo inonyorwa $ 799 muUS, iyo nepeni nekhibhodi-folio inosanganisirwa. Kugadzika kumwechete kunodhura muEurope kunyangwe, kutanga pa1000 EUR. Tarisira kubhadhara zvakapfuura $ 1100 muUS uye 1300 EUR kuEurope kwemamodeli i7 / 8 GB RAM / 512 GB SSD.
Tevera hukama huno hwekugadzirisa nekugadziriswa kwezvinhu uye nematengo panguva iyo uri kuverenga nyaya yacho.
Kusvika pakukwikwidza kuenda, kunongova nedzimwe sarudzo mbiri chete neasaridhi yakagadziriswa Core U Hardware sezvazvino:
Acer Aspire 12 Alpha - Kutengesa kweanenge madhora 750 kune iyo i5 inogadziriswa, asi neiyo yekare hardware, idiki bhatiri uye crappier speaker. Ini ndaizozvitarisa chete pamusoro peiyo Shanduko 5 kana yakanyanya kuderedzwa.
Microsoft Surface Pro 5 -Kufanorongedzwa kwakafanana kunotengesa kwe $ 1300 kuUS uye 1200 EUR muEurope isina keyboard nepeni. Iyi piritsi yakanaka pane imwe bhodhi, yakavakwa zviri nani, ine yakawanda nero screen, zviri nani mutauri uye yakakura bhatiri. Izvo hazviiti pamwe neiyo switchch 5 nemitoro inodenha kunyangwe hazvo iri kudhura zvakanyanya. Uyezve ramba uchifunga kuti iwo chete maCore i5 mhando dzisina fan, iyo Core i7 inogadziriswa inowana fan mukati.
Dzimwe nzira: Acer Alpha 12 (kuruboshwe) uye Microsoft Surface Pro (kurudyi)
Pakupera kwezuva, kana iwe uri mumusika we Windows piritsi inokwanisa kuenzanisa mashandiro ezvinyorwa zvakaonda-uye-zvishoma, ichimhanya yakanyarara, iyo Acer switchch 5 SW512-52 ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa dzekufunga.
Muchokwadi, kunze kwekunge iwe uine bhajeti risingaperi, mukati meiyo Microsoft Surface Pro 5 ndiyo yako, iyi switchch 5 ndiyo yako yekubheja yakanyanya kunaka kubva muna Gumiguru 2017. Dziva rako rakakura sekureba iwe uchigona kurarama ne fan mukati memakomputa ako (Asus Transformer 3 Pro, Lenovo Miix 720, iyo 2017 HP Spertter X2 kana iyo Dell Latitude 12 2-in-1), asi ini kune imwe ndingasarudza imwe chete. zvemidziyo iyi isina fan.
Ini pachangu ndinotarisira iyo i5 kumisikidzwa kweiyo switchch 5 iyo inotengesa $ 800 kuUS uye inogona kubata zuva nezuva kushandisa zvakanyanya uye kunyange kutakura zvimwe zvinorema zvinodikanwa kana zvichidikanwa, kusvika pamwero wakati. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti ichi hachisi chishandiso chekuwana kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinyanya kuita zvakanaka, mumuviri wakaumbirwa. Zviri mudziyo kuti uwane kana iwe ukada piritsi-senge fomu chinhu neyakaumbwa dhizaini, kuderedzwa uremu uye kugona kutora zvinyorwa uye kudhirowa neiyo inosanganisira Active peni. Kune rimwe divi, fomu-chinhu chinouya neimwe dhizaini, iyo yakakosha ichive iyo diki bhatiri rakakiiwa mukati.
Iyo switchch 5 haina kushata sepachati chero, chero bedzi iwe uchiramba uine zvakanyanya padhesiki, ine yakanaka IO uye inoshamisa inoshamisa typing. Iwe uchave nekuvandudzwa kwekuita zvinhu, kugona kwakabudirira kuita uye zvakare kumhanya-nguva mune mimwe ye clam-shell uye zvinoshanduka-shanduka malaptop kunze uko. Vashoma kwazvo avo havana fanika.
Muchidimbu, iyo Acer Shandura 5 SW512-52 ndiyo yakanyanya-kutenga mune yayo niche ye Windows mapiritsi anomhanya, aine mutengo wakanakisa uye mashoma quirks. Tiudze zvaunofunga nezvazvo muchikamu chemashoko pazasi, uye tibata kana iwe uine chero chinhu chekuwedzera kune edu maonero kana chero mibvunzo, isu tiri padhuze uye takagadzirira kubatsira.
Andrei Girbea, Mupepeti-Muku-Chief kuUltrabookreview.com. Ini handina kumbobvira ndofarira kutakura mahwendefa mahombe kutenderedza uye zvakazunza shungu dzangu yemacomputer eruzhinji kumashure kuma2000. Zvinhu zvachinja zvakanyanya kubva ipapo, asi ini ndichiri kufarira musoro wenyaya uye panguva ino ndinayo uye ndakaedza mazana emahweta nemwenje, saka ini ndoziva chinhu kana zviviri pamusoro pavo. Iwe unowana zvakanyanya kuongororwa uye magaidhi akanyorwa neni pano pane saiti.
Yakanakisa 25 2-in-1 ultraportable, mahybrids uye anotendeuka malaptop
2020 Acer Predator Helios 300 wongororo (PH315-53 - Core i7, RTX mifananidzo)
Aya ndiwo akanakisa maC Chromebook ekutengera iwe nemhuri yako
Acer TravelMate P6 (2021) ongororo: Iyo yepamusoro-yakareruka bhizinesi laptop
Iyo yakanakisisa 14 uye 15.6-inch portable laptops uye ultrabooks dze2018
Microsoft inozivisa iyo Surface Book 3 uye Surface Go 2 malaptop
Filed Under: Ita mari paIndaneti